बृहत् टुँडिखेल पार्कको मास्टरप्लान बनाउँदै सरकार :: Setopati
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, मंसिर २५
रानीपोखरीदेखि खुलामञ्चसम्मको मास्टरप्लान। स्केच: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
हामीले केही समयदेखि एउटा सपनाको कुरा गर्दै आएका छौं।
रंगशालादेखि रानीपोखरी हुँदै नारायणहिटी दरबारसम्मको क्षेत्र समेटेर काठमाडौंको मुटुमा विशाल टुँडिखेल पार्क बनाउने सपना। काठमाडौंको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक वैभव ब्युँताउँदै ‘सम्पदा सहर’ मा रूपान्तरण गर्ने सपना। यो सहरलाई ‘काठमाडौं मण्डल’ का रूपमा चिनाउने सपना।
हामीले यी सपनाको खाका कोरेर केही महिनादेखि लगातार लामा–लामा स्टोरीहरू लेख्दै आएका छौं। संसारका विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै काठमाडौंको वैभव कसरी फर्काउन सकिन्छ भन्ने प्रारुप प्रस्तुत गरेका छौं।
हामीलाई थाहा छ, हामी नागरिक र पत्रकारका रूपमा सपना त देख्न सक्छौं, तर त्यो सपनालाई कार्यान्वयनको पटरीमा दौडाउने काम सरकारको हो। हामीले देखेको टुँडिखेल पार्क र काठमाडौं मण्डलको सपना तबसम्म पूरा हुन सक्दैन, जबसम्म यो सरकारको चासो र प्राथमिकतामा पर्दैन।
के हामीले आफ्ना स्टोरीमार्फत् देखाउँदै आएको सपनाले सरकारलाई प्रभाव पारेको छ? के यसमा सरकारले चासो दिएको छ?
मैले यही जान्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीसँग गत साता लामो कुराकानी गरेँ।
उनले मंसिर १२ गते ट्वीट गर्दै भनेका थिए, ‘हामीले हनुमानढोका क्षेत्रमा रहेको प्रहरी कार्यालय भवन भत्काएर त्यहाँ खुला स्थल बनाउने तयारी गरेका छौं। त्यस क्षेत्रमा रहेका महत्वपूर्ण सम्पदाहरू संरक्षण गर्न थप केही संरचना हटाउनेबारे छलफल गरेका छौं। सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्दैछौं।’
उनको ट्वीटले मलाई उत्सुक बनायो।
वसन्तपुर दरबार क्षेत्र मल्लकालीन संरचनाहरूले भरिएको विश्व सम्पदा स्थल हो। यहाँ हामीलाई भीमकाय तलेजु मन्दिरले मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। कालभैरवको कालजन्य रौद्ररूपले झस्काउँछ। यहाँ पशुपति छ, कृष्ण मन्दिर छ। श्वेत भैरवको भीमकाय मुहार छ, कुमारी घर पनि छ।
यी सबै पुरातात्विक सम्पदाबीच ठिङ्ग उभिएको हनुमानढोका प्रहरी कार्यालय साँच्चै उदेकलाग्दो देखिन्छ। भुइँचालोले क्षति पुगेपछि प्रहरी कार्यालय टेकुको नेसनल ट्रेडिङ परिसरमा सारिएको छ। यही मौकामा हामीले यो भवन भत्काएर वसन्तपुरको जस्तै खुला डबली बनाउन वा ‘भुइँचालो संग्रहालय’ मा परिणत गर्न सेतोपाटीमा स्टोरी लेखेका थियौं।
ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालबाट दिएको सूचना त्यही स्टोरीसँग मिल्दोजुल्दो थियो।
मैले प्राधिकरणका मिडिया तथा सञ्चार प्रमुख भुवन केसीमार्फत् ज्ञवालीसँग सम्पर्क गरेँ। दिउँसो उनी व्यस्त थिए। मैले उनको मोबाइलमा ‘एसएमएस’ छाडेँ। बेलुकी फोनमा कुराकानी भयो।
उनले अगाडि थपे, ‘हामी केही समयदेखि लगातार यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं। थुप्रै मास्टरप्लानहरू बन्दै छन्। म समय मिलाएर खबर गर्छु। तपाईंसँग बसेर लामै कुरा गर्नुछ।’
केही दिनपछि भुवनको फोन आयो। सिंहदरबारको प्राधिकरण कार्यालयमा ज्ञवालीले मसँग दुई घन्टा ‘अन रेकर्ड’ कुराकानी गरे।
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रको ‘मास्टरप्लान’ बनाउने काम गरिरहेको छ।
बृहत् टुँडिखेल पार्क, काठमाडौंको ‘कोर-सिटी’ लाई सम्पदा सहरमा रूपान्तरण गर्ने, सुन्धारालाई खुलास्थल बनाउने लगायतका मास्टरप्लानमा काम भइरहेको ज्ञवालीले बताए।
‘अधिकांश मास्टरप्लानको पहिलो खाका तयार छ। विभिन्न समूहहरूले अन्तिम रूप दिँदै छन्,’ उनले भने।
योजनाहरू बन्नु आफैंमा उपलब्धि हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ। हामी पछि परेको योजना अभावले होइन। हाम्रा मन्त्रालय र विभागहरूमा टन्नै छन्। कार्यान्वयनमा भने कोही गम्भीर हुँदैनन्। यो चुनौतीलाई प्राधिकरणले कसरी हेरेको छ?
‘हामी योजना मात्र बनाएर बसेका छैनौं। अन्तिम नक्सा आउनुअघि नै मस्यौदामा परेका र पहिलो चरणमा गर्न सकिने कामहरू पहिचान गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायसँग परामर्श भइरहेको छ। कतिपय काम निर्णय भएर अगाडि बढिसकेको छ।’
उनले यो पनि भने, ‘मास्टरप्लानका सबै काम मेरो कार्यकालमा पूरा गर्न सम्भव छैन। प्राधिकरण वा यो सरकारकै कार्यकालमा पनि सबै योजना पूरा हुन सक्दैनन्। हामी यसलाई अन्तिम टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउने छौं। त्यसपछि कार्यविधि बन्छ। कामका आधारमा कार्यान्वयन निकाय छुट्टयाइन्छ। कुन काम स्थानीय सरकारले गर्ने, कुन संघीय र कुन प्रदेश सरकारले गर्ने भनी तोकिन्छ।’
मैले यी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटको स्रोत के हो भनेर सोधेँ।
उनका अनुसार सबै मास्टरप्लानको बजेट आइसकेको छैन। पहिलो चरणको काम गर्न प्राधिकरणले साढे दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएको छ। यो रकम हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, रानीपोखरी र काठमाडौंको ‘कोर-सिटी’ पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ।
अब हामी प्राधिकरणमा बन्दै गरेका मास्टरप्लानहरूको विस्तारमा चर्चा गर्नेछौं।
सबभन्दा पहिला ‘बृहत् टुँडिखेल पार्क’ को कुरा गरौं।
‘रानीपोखरी र टुँडिखेल क्षेत्र संरक्षण नभएसम्म काठमाडौं सभ्यता जोगाउन सकिन्न। जुन हिसाबले काठमाडौं सहर फैलिरहेको छ, हामीलाई ठूलो क्षेत्रफल भएको खुला स्थलको खाँचो पर्छ, जसले यहाँको प्राचीन सभ्यता र आधुनिक बसोबासलाई आपसमा जोड्छ। बृहत् टुँडिखेललाई हामीले यही रूपमा लिएका छौं। केशरमहलदेखि नारायणहिटी, रानीपोखरी, रत्नपार्क, खुलामञ्च, टुँडिखेल, सैनिक मैदान र रंगशालासम्मलाई एकीकृत प्याकेजमा हेरेर मास्टरप्लान बन्दैछ,’ उनले विस्तार लगाए।
बृहत् टुँडिखेल मास्टरप्लानमा चार चरणका योजना छन्। पहिलो चरणको नक्सा तयार भइसकेको छ। रानीपोखरी पुनर्निर्माण यसैको एउटा हिस्सा हो। यसले रानीपोखरीसँगै जोडिएको त्रिचन्द्र कलेज र रत्नपार्क हुँदै खुलामञ्चसम्मको भू–भाग समेट्छ।
अब हामी पहिलो चरणको मास्टरप्लान कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ, त्यो हेरौं।
मुख्यगरी तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको थियो।
पहिलो, त्रिचन्द्र कलेज परिसर एकदमै साँघुरो भएकाले नयाँ संरचना थप्न सम्भव छैन। कलेजको क्षमता विस्तार गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर परिसरभित्र छुट्टै ठाउँमा सार्न सकिन्छ।
यो योजना कार्यान्वयन भएपछि रानीपोखरी वरिपरिको खुला स्थल कस्तो देखिन्छ, मास्टरप्लानको यो चित्रमा हेर्नुस्।
यहाँ रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कुरा पनि जोडिन्छ।
सरकारले यसको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएपछि परम्परागत शैलीमा काम हुँदैछ। माटो मुछ्नेदेखि इँटा बिछ्याउने र पानी जम्मा गर्ने काममा भक्तपुरका स्थानीय परिचालन गरिएको छ।
पोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर मल्लकालीन ग्रन्थकुट, अर्थात् शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। राणाकालमा ग्रन्थकुट फेरेर गुम्बज शैलीमा बनेको थियो। अहिले पुरानै स्वरूपमा फर्काउन खोजिएको छ। निर्माण कम्पनीमार्फत् भइरहेको यो काम अनुगमन गर्न पुरातत्वविद्, जनप्रतिनिधिसहितको विज्ञ समिति गठन गरिएको छ।
पानीको स्रोतबारे भूगर्भविद् र भूमिगत जलस्रोत विज्ञहरूसँग परामर्श भइरहेको उनले बताए।
विगतमा रानीपोखरीमुनि सातवटा इनार छ भनिएको थियो। ती फेला परेका छैनन्। यहाँको माटो परीक्षण गर्दा पूरै क्षेत्र भरिने गरी पानी रसाउने अवस्था पनि देखिएन। त्यही भएर तीनवटा विकल्पमा काम भइरहेको छ — ट्युबवेल खनेर पानी निकाल्ने, बर्खाको पानी जम्मा गर्ने र सुख्खा यामका लागि मेलम्ची प्रयोग गर्ने।
रानीपोखरीपछि कुरा आउँछ, रत्नपार्क र खुलामञ्चको।
पहिलो चरणको टुँडिखेल मास्टरप्लानअनुसार अब रानीपोखरी र रत्नपार्कबीचको बाटोमा सवारी आवागमन बन्द गरिनेछ। यहाँ पैदलयात्रु मात्र हिँड्न पाउनेछन्। यसले रानीपोखरी र रत्नपार्क आपसमा गाभिनेछन्। त्यसपछि रत्नपार्कको हिस्सा पनि पुनर्संरचना गरेर बृहत् टुँडिखेलकै अंग बनाइनेछ।
रत्नपार्कमा बगैंचा छँदैछ। यसलाई ‘थिम पार्क’ का रूपमा विकास गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। गोदावरीको बोटानिकल गार्डेनजस्तै यहाँ विभिन्न जातका फूल र मध्य–सहरमा हुर्कन सक्ने पुतलीहरूमाथि अनुसन्धान हुनेछ। एउटा हिस्सामा ‘पुतली बगैंचा’ पनि निर्माण गरिनेछ।
रत्नपार्कसँगै जोडिएको खुलामञ्चमा बसपार्क सञ्चालन भइरहेको छ। अरू भौतिक संरचनाहरू पनि बनेका छन्। यी सबै संरचना यहाँबाट हट्नेछन्। त्यसपछि खुलामञ्च मर्मत गरेर विगतमा जस्तै राजनीतिक तथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरू गर्न मिल्ने थलोका रूपमा राखिनेछ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा खुलामञ्चको ठूलो भूमिका छ। केही वर्षअघिसम्म यहाँ राजनीतिक दलका आमसभा हुन्थे। कार्यक्रम नहुँदा सर्वसाधारण सुस्ताउन आइपुग्थे। पञ्चायतदेखि राजतन्त्रसम्मको विरोध देखेको यो चउरलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सम्झनाका रूपमा जीवित राख्ने ज्ञवालीले बताए।
उनका अनुसार, खुलामञ्चको भुइँमा दुबो लगाउने कि ढुंगा वा इँटा बिछ्याउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। दुबो लगाउँदा भीडभाड बेला मासिने डर हुन्छ। प्राचीन शैलीको इँटा बिछ्याएर पम्परागत स्वरूपमा ढाल्न सकिन्छ। खुलामञ्चको सार्वजनिक ‘अडिटोरियम’ पनि नयाँ ढंगमा पुनर्निर्माण गरिनेछ।
मास्टरप्लानको पहिलो चरण सकिएपछि त्रिचन्द्रदेखि रानीपोखरी हुँदै खुलामञ्चसम्मको क्षेत्र कस्तो देखिन्छ, तलको भिडिओमा हेर्नुस्।
अब कुरा गरौं, दोस्रो चरणको।
यसमा दुइटा योजना छन् — रानीपोखरीबाट उत्तर नारायणहिटी हुँदै केशरमहलसम्मको योजना र दक्षिणमा टुँडिखेल, सैनिक मैदान हुँदै रंगशालासम्मको योजना।
सैनिक मञ्च र टुँडिखेलदेखि रंगशालासम्मको क्षेत्र सेनाको स्वामित्वमा छ। सहिदगेट र रंगशालाबीचको भाग त सेनाले पूरै ओगटिसक्यो। यहाँ उनीहरूका ‘पार्टी प्यालेस’, खेल मैदान र पुस्तकालय छन्। टुँडिखेलको खुला चउरमा पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरू गर्न सेनाको अनुमति लिनुपर्छ। यी सबै क्षेत्र सेनाले खुला पार्क बनाउन छाड्ला त?
‘यसरी बृहत् टुँडिखेल रानीपोखरीदेखि दशरथ रंगशालासम्म जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि टुँडिखेलबाटै रंगशाला छिर्न मिल्ने बाटो खोल्नेछौं।’
(यो पनि हेर्नुहोस्: टुँडिखेल पार्कका लागि राष्ट्रपति र सेनापतिसँग 'लबिङ' गर्दा)
यहाँनिर सहिदगेटको बाटोमा पनि रत्नपार्कजस्तै सवारी आवागमन निषेध गरिनेछ। यहाँ मान्छे मात्र हिँडडुल गर्न पाउनेछन्।
टुँडिखेलमुनिको भूमिगत ‘बाइपास’ सडक र भूमिगत पार्किङको निम्ति करिब सात अर्ब रूपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ।
भूमिगत पार्किङ काठमाडौंको ‘कोर-सिटी’ लाई सवारीमुक्त गर्ने योजनाको हिस्सा हो, जसका बारेमा म अर्को अंकमा चर्चा गर्नेछु।
टुँडिखेलमुनि बन्ने भूमिगत सडक र पार्किङ। स्केच: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
‘काठमाडौंको कोर–सिटी घुम्न आउनेहरूले आफ्नो गाडी टुँडिखेलको अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा राख्नेछन्। सार्वजनिक बस पनि यहीँ रोकिन्छ। मान्छेहरू पार्किङबाट टुँडिखेल पार्कमा उक्लनेछन्। हराभरा पार्कको बीचमा हिँड्दै मध्यसहर छिर्नेछन्,’ ज्ञवालीले भने।
यति मात्र होइन, टुँडिखेलमुनिको भू–भागलाई प्राधिकरणले भविष्यमा निर्माण हुने मेट्रो रेलको ‘हब’ का रूपमा विकास गर्दैछ।
‘भविष्यमा टुँडिखेलको अन्डरग्राउन्ड नयाँ र पुरानो सहरको मास–ट्रान्जिट केन्द्र हुनेछ,’ उनले भने।
के यो मास्टरप्लानले त्रिपुरेश्वरदेखि दरबारमार्गसम्मको सडक पनि ‘अन्डरग्राउन्ड’ गर्ने परिकल्पना गरेको छ?
खुलामञ्च र रत्नपार्क बीचमा अन्डरग्राउन्डतिर मोडिने बाइपास सडक। स्केच: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
दोस्रो चरणकै अर्को योजनामा रानीपोखरीलाई दरबारमार्ग हुँदै नारायणहिटी र केशरमहलसँग जोडिनेछ।
दरबारमार्गमा अहिल्यै पैदलयात्रु हिँड्ने फराकिलो बाटो छ। यसलाई अझ विस्तार गर्न सकिन्छ। गाडीभन्दा पैदलयात्रुलाई प्राथमिकता दिने गरी सडक पुनर्संरचना हुनेछ। यसले नारायणहिटी र केशरमहल बृहत् टुँडिखेलकै हिस्सा बन्नेछन्।
‘नारायणहिटीलाई भूमिगत पैदलमार्गबाट केशरमहलसँग जोड्न सकिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामीले छलफल गर्दा विगतमा यहाँ भूमिगत मार्ग थियो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो मार्ग अहिले ढलमा परिणत भएको सुनिन्छ। हामी त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न सक्छौं। यति छोटो दुरीमा नयाँ भूमिगत मार्ग वा नारायणहिटी–केशरमहल जोड्ने ओभरहेड पुल बनाउनु पनि ठूलो कुरा होइन।’
केशरमहल विकासनिम्ति प्राधिकरणसँग छुट्टै योजना छ। यसलाई कला, संस्कृति र संगीत संग्रहालयमा रूपान्तरण गरिनेछ। लोकबाजा संग्रहालय, ललितकला प्रतिष्ठान लगायत यस क्षेत्रसँग जोडिएका निकाय यहाँ सारिनेछन्। केटाकेटीलाई संगीत र चित्रकला सिकाउने छुट्टै केन्द्र पनि बन्नेछ।
अब कुरा गरौं, तेस्रो चरणको।
पहिलो र दोस्रो चरणको मास्टरप्लानले टुँडिखेललाई रंगशालादेखि केशरमहलसम्म जोडेपछि तेस्रो चरणमा के गर्ने त?
यसमा खुलामञ्चदेखि टुँडिखेलसम्मको क्षेत्रलाई भृकुटीमण्डप हुँदै पुतलीसडकसम्म विस्तार गर्ने योजना पर्छ।
टुँडिखेलमुनि यति फराकिलो भूमिगत संरचना बनाउँदा काठमाडौंको पर्यावरणमा प्रभाव पर्दैन त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। टुँडिखेल भनेको बर्खाको पानी सञ्चित भएर जमिन ‘रिचार्ज’ हुने ठाउँ हो। भूमिगत संरचना बनाएपछि जमिनमुनि पानी कसरी सञ्चित रहला?
(हेर्नुहोस्ः माथिमाथि पार्क, मुनिमुनि पार्किङ)
‘हामीले सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छौं। यो योजना कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ, तर असम्भव छैन,’ ज्ञवालीले भने।
बृहत् टुँडिखेल पार्कका यी तीन चरण कार्यान्वयनमा आएपछि मध्य–काठमाडौंको मुटुमा हामीले सपना देखेजस्तै विशाल पार्कको योजना पूरा हुनेछ।
अर्को अंकमा हामी काठमाडौंको ‘कोर-सिटी’ लाई पुरानो वैभव ब्युँताउँदै ‘सम्पदा सहर’ मा रूपान्तरण गर्ने मास्टरप्लानबारे चर्चा गर्नेछौं।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २५, २०७६, २१:५८:००
ओलम्पिकको पदक तालिकामा जापान र चीनको कडा प्रतिस्पर्धा, अमेरिका तेस्रो स्थानमा
कोरोना महामारी बढेपछि झापा जिल्ला लकडाउन गर्ने प्रशासनको निर्णय
यी विषय टुंग्याउन कांग्रेसका शीर्ष नेताले लिए ५ दिन समय
यताका भगवानलाई जोगाउन गाह्रो, चोरिएकालाई फर्काउन गाह्रो!
ओलीले भने- पार्टीको विवादबारे चाँडै छिनोफानो गर्नुस्
कञ्चनपुरबाट भन्सार छलेको छ लाख बराबरको चिनी बरामद
'चार करोडको धार्मिक ग्रन्थ' भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
महोत्तरीमा बालकको शव फेला, बुवा र सौतेनी आमा फरार
म जनता! रवीन्द्र महर्जन 'वसन्त'
माया र सम्बन्ध सुनिताकुमारी गजुरेल
हे इन्दु! उत्तम रोका